I-EFF ivulele ababili amacala angu-94 okubulala | News24
I-EFF ivulele ababili amacala angu-94 okubulala
Johannesburg - Amalungu e-EFF esiShayamthetho esifundazweni saseGauteng ngoLwesine avulele undunankulu wesifundazwe nobengungqongqoshe wezempilo amacala angu-94 okubulala.
Ngemuva kosuku, uNdunankulu uDavid Makhura ememezele ngokushona kweziguli ezingu-94 eziphazamisekile ngokomgqondo ngemuva kokukhishwa esikhungweni esigunyaziwe iLife Esidimeni, zayobekwa ezikhungweni ezizimele ezingagunyaziwe ezingu-27, abaholi be-Economic Freedom Fighter bathe kufanele avule amacala.
OLUNYE UDABA: EZINGEMA MANJE: Usesulile uNgqongqoshe wezeMpilo - Umbiko
NgoLwesine ekuseni, iqembu belisesiteshini samaphoyisa maphakathi nedolobha iGoli lithi uMakhura nobenguNgqonqgoshe wezeMpilo uQedani Mahlangu, osule ngoLwesithathu esikhundleni sakhe bazibulale ngokungenhloso iziguli.
Esitatimendeni, i-EFF ithe amalungu esiShayamthetho eqembu azophinde avulele amacala izikhungu ezizimele ezingu-27 kanye nawo wonke umuntu othintekayo ekubulaweni kweziguli ezingu-94.
USolwazi obhekelele ezeMpilo, uMalegapuru Makgoba, owayalelwa ngungqongqoshe wezeMpilo u-Aaron Motsoaledi ukuba aphenye isigameko sokushona kwalezi ziguli, uthole ukuthi ezashona phakathi kukaMashi noDisemba 2016 zingu-80% iziguli.